Tag: atiny mifangaro | Martech Zone
Tag: atiny mifangaro
Raha toa ianao ka tsy maintsy nampiasa fitaovana mpanamboatra tranokala mba hanandramana sy hanara-maso ny sary vetaveta na hampiditra tsy azo antoka, fantatrao fa mahasosotra izany. Tsara vintana ho antsika fa nisy fanavaozana mahafinaritra ny Semrush amin'ny tranokalan'ny tranokala feno - ny fanampin'ny maso HTTPS. Afaka manao fanamarinana HTTPS lalina ianao izay mahatratra 100 isan-jaton'ny tolo-kevitry ny fiarovana Google. Fa maninona no manan-danja tokoa ny HTTPS? Mifindra avy amin'ny HTTP mankany amin'ny HTTPS